QR कोड निर्माता: डिजिटल वा प्रिन्टको लागि सुन्दर QR कोडहरू कसरी डिजाइन र व्यवस्थापन गर्ने | Martech Zone
हाम्रा एक ग्राहकसँग 100,000 भन्दा बढी ग्राहकहरूको सूची छ जसलाई उनीहरूले डेलिभर गरेका छन् तर उनीहरूसँग सञ्चार गर्न इमेल ठेगाना छैन। हामीले सफलतापूर्वक मेल खाएको इमेल एपेन्ड गर्न सक्षम भयौं (नाम र मेलिङ ठेगानाद्वारा) र हामीले स्वागत यात्रा सुरु गर्यौं जुन धेरै सफल भएको छ। अन्य ६०,००० ग्राहक हामी हौं पोस्टकार्ड पठाउँदै तिनीहरूको नयाँ उत्पादन प्रक्षेपण जानकारीको साथ।
अभियान कार्यसम्पादन ड्राइभ गर्न, हामी ए समावेश गर्दैछौं QR कोड यसमा UTM ट्र्याकिङ छ ताकि हामी प्रत्यक्ष मेल अभियानबाट आगन्तुकहरूको संख्या, दर्ता, र रूपान्तरणहरू निगरानी गर्न सक्छौं। सुरुमा, मैले सोचे कि यो एक साधारण प्रक्रिया हुनेछ, तर भेक्टर-आधारित QR कोड थप्दा मैले सोचेको भन्दा बढी समस्याग्रस्त थियो। हरेक अन्य चुनौतीको रूपमा, त्यहाँ समाधान छ ... QR Code Generator.
हामीले गरिरहेको प्रत्यक्ष मेल बाहेक QR कोडहरूको लागि धेरै प्रयोगहरू छन्, तपाईंले QR कोडहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ:
कुपन कोड वा छुट प्रदान गर्नुहोस्।
तपाईंको सम्पर्क विवरणहरू डाउनलोड गर्न आगन्तुकहरूको लागि vCard बनाउनुहोस्।
अनलाइन PDF मा लिङ्क गर्नुहोस्।
साइनेजबाट अनलाइन अडियो, भिडियो वा फोटो टुर खोल्नुहोस्।
मूल्याङ्कन अनुरोध गर्नुहोस् वा प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्नुहोस्।
तपाईंको रेस्टुरेन्टको लागि टचलेस मेनु प्रदान गर्नुहोस् (यो महामारीको समयमा धेरै लोकप्रिय थियो)।
घटना प्रचार गर्नुहोस्।
SMS मार्फत सदस्यता लिनुहोस्।
तपाइँको वितरण गरिएको प्रिन्ट सामग्रीहरूको लागि घटना-विशिष्ट QR कोडहरू प्रदान गर्नुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो, तपाईं आफ्नो QR कोड को उपयोग ट्र्याक र संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ एनालिटिक्स अभियान ट्र्याकिंग URL मा पनि। म सँधै QR कोडहरूमा बेचेको थिइनँ किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई लामो समयको लागि एउटा एप डाउनलोड गर्न आवश्यक छ, तर अब तपाईंले क्यामेरा प्रयोग गर्दा QR कोड रिडरहरू दुवै iPhone र Android मा स्वचालित हुन्छन्। यसले तिनीहरूलाई तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूसँग मोबाइल उपकरण भएको ठाउँमा समावेश गर्न उत्कृष्ट बनाउँछ र तपाईं तिनीहरूसँग डिजिटल रूपमा अन्तरक्रिया गर्न चाहनुहुन्छ।
QR कोड जेनरेटर सुविधाहरू
QR Code Generator को एक उत्पादन हो बिट.ली, सबैभन्दा लोकप्रिय URL छोटो बनाउने प्लेटफर्महरू मध्ये एक। QR कोड जेनरेटर मार्केटरहरूको लागि एक-स्टप समाधान हो, प्रो संस्करणमा समावेश छ:
व्यवस्थापन - तपाईले आफ्नो सबै QR कोडहरू एउटा केन्द्रीय प्लेटफर्मबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा प्रत्येक कोडलाई लेबल गर्ने र यसको आफ्नै फोल्डरमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता समावेश छ।
सहयोग गर्नुहोस् - तपाइँ टोली सदस्यहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै लगइनहरू थप्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूसँग डिजाइनहरूमा सहकार्य गर्न वा रिपोर्टिङ साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
डिजाइनर - डिजाइनर सहज छ, रङ, ब्रान्डिङ (लोगो), र कल-टु-एक्शन अनुकूलन समावेश गर्ने पूर्ण रूपमा अनुकूलन योग्य QR कोड डिजाइन गर्न सक्षम पार्दै।
ल्यान्डिङ पृष्ठहरू - QR कोडहरूमा मोबाइल, ट्याब्लेट वा डेस्कटपमा प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको अन्तर्निर्मित ल्यान्डिङ पृष्ठहरू छन्।
छोटो URL - प्लेटफर्ममा URL सर्टनर समावेश छ त्यसैले तपाईंले प्लेटफर्म प्रयोग गर्नु अघि URL छोटो गर्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन।
विश्लेषण - QR कोड स्क्यानहरूको संख्या प्लेटफर्ममा समावेश गरिएको छ र तपाइँ डेटालाई CSV फाइलमा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ।
भेक्टरहरू - प्रिन्टको लागि QR कोड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? कुनै समस्या छैन - तपाइँ QR कोड धेरै ढाँचाहरूमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ - PNG, JPG, SVG, वा EPS सहित (अतिरिक्त डिजाइनहरू बिना कालो र सेतो)।
एपीआई - तपाईको प्लेटफर्ममा API हरू एकीकृत गर्न चाहनुहुन्छ? तिनीहरूसँग यसको लागि पूर्ण REST API छ!
QR कोड जेनरेटर परिणामहरू
यहाँ एउटा QR कोड छ जुन मैले यस लेखको लागि केही मिनेटमा बनाएको छु। अवश्य पनि, तपाईले यसलाई मोबाइल उपकरणमा पढिरहनु भएको हुनसक्छ त्यसैले वास्तविक URL तल बटनमा छ। तर यदि तपाइँ यसलाई डेस्कटपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको फोनलाई कुनै पनि उपकरणको QR कोडमा देखाउनुहोस् र तपाइँले तुरुन्तै गन्तव्य URL खोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने देख्नुहुनेछ।
नि: शुल्क QR कोड जेनरेटर परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहोस्
खुलासा: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गरिरहेको छु QR Code Generator QR कोड र लेख दुवैमा।
टैग: बिट.लीडिजाइन क्यूआर कोडप्रत्यक्ष मेलiOSiphoneलोगो क्यूआर कोडक्यूआर कोडहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्मोबाइल मार्केटिङPhotoshopमुद्रणQR CodeQR कोड निर्माताQR कोड रंगQR कोड डिजाइनरQR कोडहरूछोटा कोडहरूurl छोटो पार्ने
WordPress: jQuery प्रयोग गरेर LiveChat विन्डो खोल्नको लागि लिङ्क वा बटनमा क्लिक गरेर Elementor प्रयोग गरेर